I Masoandro Tsy Resy na Sol Invictus, amin' ny teny latina, dia andriamanitra masoandro nivavahana tao amin' ny Empira Rômana tamin' ny taonjato faha-3. Naka ny endriky ny fedrà momba an' i Apôlôna sy ny fombam-pivavahana amin' i Mitra ny fivavahana taminy, sady nalaza teo amin' ny vahoaka. sy tao amin' ny tafika rômana.
Tamin' ny voalohany, i Kônstantino I, iray amin' ireo mpandimby an' i Aoreliano, dia nivavaka tamin' i Masoandro Tsy Resy talohan' ny niovany ho Kristiana. Nataony andro fitsaharana hanajana ny Masoandro Tsy Resy ny andro Alahady, izay nantsoina hoe "andron' ny Masoandro" tamin' ny alalan' ny lalàna nivoaka tamin' ny 7 Marsa taona 321. Efa nankalaza ny Alahady ho andro nitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty sy andro voalohany amin' ny herinandro ny Kristiana tamin' izany fotoana izany, ka niangona handray ny eokaristia na fanasan' ny Tompo amin' ny Alahady. Tamin' izany anefa dia anaram-boninahitra maha Mesia nomena an' i Jesoa Kristy ny hoe "masoandron' ny fahamarinana", izay toa fitsofohan' ny eva famantaran' ny Masoandro rômana ao amin' ny fivavahana kristiana.
Nandritra ny naha fivavaham-panjakana ny fivavahana kristiana dia nisolo tsikelikely ny fetin' ny Masoandro Tsy Resy ny fankalazan' ny Kristiana tao Rôma ny nahaterahan' i Jesoa amin' ny 25 Desambra. Noraràn' i Teôdosio tamin' ny alalan' ny didim-panjakana tao Tesalônika tamin' ny taona 380 ny fivavahana amin' ny Masoanro Tsy Resy, ka lasa fetin' ny Kristiana manokana tsy mifangaro ny 25 Desambra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Masoandro_Tsy_Resy&oldid=1041502"
Dernière modification le 13 Desambra 2021, à 14:24
Voaova farany tamin'ny 13 Desambra 2021 amin'ny 14:24 ity pejy ity.